Review and raffle for "The Dream Interpreter" by Rafael R. Costa | Izincwadi Zamanje
UCarmen Guillen | | Abalobi, Izinhlobo, Literatura, I-Novela
Namuhla sihlaziya futhi sibuyekeze incwadi ebhalwe ngumdabu waseHuelva URafael R. Costa, "Umhumushi Wamaphupho", ihlelwe yi I-Espasa yokuhlela bese uthengisela umphakathi ama-euro angama-19'90. Ekupheleni kwalesi sihloko, sizophinde sikutshele ukuthi ungayithola kanjani ikhophi ngokuphelele mahhala ngenxa yenqwaba esizoyikhangisa kokubili ku-Twitter nakwikhasi lethu le-Facebook.
1 Isifinyezo esisemthethweni sencwadi neminye imininingwane
2 Umbhali: Rafael R. Costa
Isifinyezo esisemthethweni sencwadi neminye imininingwane
Isihloko: Utolika wamaphupho.
Umbhali: URafael R. Costa.
Ulimi lokuqala: Isi-Español.
Iqoqo: I-Espasa elandisayo
Unyaka wokushicilelwa: 02 / 10 / 2014.
Isethulo: I-Rustic enezinhlamvu.
Amasethingi wenganekwane yendaba eyinganekwane: inganekwane ephathelene nowesifazane ohlukile nangothando, ubungani, isibindi nokuzidela esikhathini esinzima kakhulu emlandweni wethu wakamuva. Lapho uSarah Georginas Parker osemncane engena kwiTitanic, akacabangi ukuthi amacebo akhe azoshintsha unomphela. Ingabe i- Ama-XNUMXs, isikhathi esinzima ikakhulukazi kowesifazane ongumJuda onendodana encane edolobheni elifana nePrague. Ebhekene nezimo ezingezinhle ezilethwa yisikhathi samanje, uya e-United States, lapho azosebenza khona njengomhumushi wamaphupho, ngokuya ngezimfundiso zikaSigmund Freud. IKhabhinethi yakhe maduze izovakashelwa yinhlangano ephakeme yaseNew York futhi impilo yakhe izoshintsha.Nokho, ngemuva kweminyaka engamashumi amabili, uSarah ubuyela eYurophu: unebhizinisi elingapheli. Kepha kungama-XNUMX futhi kugqashuka iMpi Yezwe II.
Umbhali: Rafael R. Costa
Wazalelwa Huelva Ngo-1959, wayengumtapo wolwazi edolobheni langakubo, umsebenzi awunikela iminyaka emihlanu futhi awushiya waya eMadrid futhi wazinikela ngokuphelele emsebenzini wokubhala. Kude nezwe elijwayelekile lokushicilela, uzishicilele ngokwakhe amanoveli amaningi ngempumelelo efanelekile.
Ngaphambi kokuqhubeka nokubhala (noma ukuthayipha, kunalokho) ngizothi yi- inoveli ebalulekile, nokuthi mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu kungithathe kancane ukuyithola kuqala. Kuyinoveli elandiswa ngokuhamba kancane nangolimi olulula nolumnandi. Mangisho ukuthi ikhava yinhle, inobuhle obulula nobucashile obukhuthaza ukufunda. Kepha ake siqale ngokubuyekeza okujulile ...
Le ncwadi ibhalwe kumuntu wesithathu owedlule ngumbhali owazi konke ositshela izehlakalo ezinikeza udumo olukhulu kuSarah Georginas Parker, ophambili endabeni. Incwadi ihlukaniswe izingxenye ezintathu eziyinhloko: eyokuqala ibizwa ngokuthi Imikhuhlane yaseMalta futhi ihlanganisa okwedlule kukaGeorginas kanye nesinqumo sakhe nezizathu zokushiya ikhaya eyofuna ikusasa elichumayo nelifanele. Yingxenye ebiza kakhulu uma kukhulunywa ngokuyifunda ngoba kuhamba kancane. Futhi kuyingxenye echaza kakhulu, lapho inikeza khona idatha engabalulekanga kangako ekuthuthukisweni kwencwadi. Ingxenye yesibili ithi Icala likaHarry lokubhema lapho kwenzeka khona uSarah Georginas ezweni angalazi nhlobo kuye, umhlaba wabacebile. Le ngxenye ithwebula umfundi kakhulu futhi ijabulisa kakhulu kunokuqala. Ekugcineni ingxenye yesithathu, Impisi yokulala. Akungabazeki ukuthi iyona engcono kunazo zonke incwadi yonke. Ikhokhiswa imizwa, ukungezwani nobungozi obukhulu, obukhulu. Ngayifunda ezinsukwini ezimbalwa ngoba angikwazi ukususa amehlo ami encwadini.
Okudonse impela ukunaka kwami ​​ngalo msebenzi inani le- izibalo zomlando okuvelayo: UHitler, uFreud, uKafka, njll ... Lokhu kuzokumangaza, ngokungangabazeki!
Kuyinto inoveli isethwe kahle futhi yabhalwa phansi, kuze kufike ezingeni lokuthi kwesinye isikhathi, ngenkathi kufundwa, kuba sengathi umfundi uhamba kuleyo migwaqo lapho kuvela khona "izigcawu". URafael R. Costa kuye kwadingeka enze umsebenzi obanzi wemibhalo ukuze akwazi ukubhala le noveli. Konke kufakwe kahle ngokwendawo nangezikhathi.
I-Los abalingiswa sencwadi nayo ichazwe kahle kakhulu futhi uma bekufanele ngiyigcine ngokungangabazeki kube yi-protagonist uqobo, uSarah. Ungowesifazane onomlingiswa oqinile, oqinile, othembekile kumagugu nemigomo yakhe, onesibindi ...
Ngamafuphi: a inoveli enekhono kakhulu, iphumelele kakhulu, ekufanele kakhulu ukuyifunda futhi ngokungangabazeki ukutholwa okukhulu ngumbhali.
Isikhathi sokudonsa! Uma ufuna ukuthola ikhophi yale ncwadi enhle "The Dream Interpreter", sichaza ngezansi ukuthi:
Okokuqala, kufanele ube ngumlandeli we-akhawunti Twitter de Izincwadi Zamanje. Uma ungasilandeli, ungakwenza lokho usebenzisa inkinobho elandelayo.
Okwesibili, kufanele uthumele i-tweet usebenzisa i-hastag #ALInterpretadorDeDreams noma usebenzisa inkinobho elandelayo.
Okokuqala kufanele ube umlandeli yethu Ikhasi le-Facebook. Uma ungekho, ungaba fan ngokusebenzisa inkinobho elandelayo:
Futhi ekugcineni kufanele unikeze "ukwabelana" ngokuchofoza inkinobho elandelayo:
Umuntu ngamunye ohlangabezana nalezi zidingo uzonikezwa inombolo futhi phakathi kwabo bonke ababambiqhaza sizokhetha inombolo yomnqobi ngokungahleliwe ngokusebenzisa ithuluzi le-random.org. I- igama lomnqobi Umdwebo uzokwaziswa esidlangalaleni ngama-akhawunti e-Twitter nakuFacebook we-Actualidad Literatura futhi sizoxhumana naye ngqo.
Umdwebo uqala ngesikhathi esifanayo lapho lesi sibuyekezo sishicilelwa khona kuze kube nguFebhuwari 20 (ngoLwesihlanu) ngo-23: 59 ebusuku.
Inhlanhla, futhi ngiyabonga ngokubamba iqhaza!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Buyekeza kanye ne-raffle ye- "The Dream Interpreter" kaRafael R. Costa